The Kpop Times - KeyEast အေဂျင်စီနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်တဲ့ မင်းသား ဂျီဆူး
updated 1:10 PM UTC, Feb 10, 2022
KeyEast အေဂျင်စီနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်တဲ့ မင်းသား ဂျီဆူး
မင်းသား ဂျီဆူးဟာ KeyEast အေဂျင်စီနဲ့ တရားဝင်လက်တွဲလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်မှာ KeyEast ရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနအကြီးအကဲ လီယွန်ဝူးက ဂျီဆူးဟာ အေဂျင်စီနဲ့ စာချုပ်တစ်ခုကို ချုပ်ဆိုလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
လီယွန်းဝူက "ဂျီဆူးဟာ သူ့ရဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ ဆွဲဆောင်မှုခွန်အားကို သူ့ရဲ့ ပုံပန်းသွင်ပြင်မှာ ပေါင်းစပ်ပြီး အကန့်အသတ်မရှိတဲ့ ဇာတ်ကောင်စရိုက်ပေါင်းများစွာကို ဆွဲထုတ်နိုင်စွမ်းတွေရှိတာကြောင့် တော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားခံခဲ့ရပါတယ်။ လူငယ်တွေနဲ့ အသက်နှစ်ဆယ်ကျော်အရွယ်တွေကို ကိယ်စားပြုမယ့် မင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဂျီဆူးကို ကျနော်တို့က တက်တက်ကြွကြွ ထောက်ခံအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။" လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဂျီဆူးဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ "Angry Mom" ဒရာမာကို ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတဲ့နောက် “Weightlifting Fairy Kim Bok Joo” နဲ့ “When I Was the Most Beautiful” ဒရာမာတို့အပါအဝင် နာမည်ကျော် ဒရာမာတော်တော်များများမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
KeyEast စီမံခန့်ခွဲရေးအေဂျင်စီကိုတော့ မင်းသား ဘေယောင်ဂျွန်းက ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဂျူဂျီဟွန်း၊ ဆွန်းယောင်ဂျူ၊ ဝူဒူဟွမ်ဈ ကင်ဒုံဝုနဲ့ ကင်ဟန်နာတို့လို နာမည်ကျော်သရုပ်ဆောင်တွေရှိရာ အေဂျင်စီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကွယ်လွန်သူမင်းသမီး ကင်မီဆူးဆီ နွေးထွေးတဲ့သတင်းစကားရေးသားခဲ့တဲ့ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင် ဂျီဆူး
ဂျီဆူးကတော့ ကွယ်လွန်သူမင်းသမီး ကင်မီဆူးဆီ နှလုံးသားနဲ့ရေးတဲ့ သတင်းစကားတစ်ခုကို ပါးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
'Snowdrop' သရုပ်ဆောင်နဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးမှာ ကိုဗစ်ပိုးမတွေ့ကြောင်း အတည်ပြု
နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်မှာ JTBC ရုပ်သံလိုင်းဟာ သူတို့ရဲ့ 'Snowdrop' ဒရာမာအတွက် သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဟာ COVID19 ပိုးမတွေ့ ဆေးစစ်အဖြေထွက်ခဲ့တယ်လို့ မီဒီယာအသီးသီးကို အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။
"Snowdrop" ဒရမ်မာမှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ် Jisoo ဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်ခံခဲ့ရလဲ
BLACKPINK အဖွဲ့ဝင် Jisoo ဟာ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း "Snowdrop" လို့အမည်ရတဲ့ ဒရမ်မာမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Jisoo အကြိုက်ဆုံး အင်္ဂလိပ်စာကြောင်းကဘာလဲ
BLACKPINK အဖွဲ့ဟာမကြာသေးခင်က Jimmy Kimmel နဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
မျက်နှာဖောင်းဖောင်းလေးရဖို့ Jisoo ဘာလုပ်လေ့ရှိသလဲ
အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့မှာ JTBC ရဲ့ " Ask Us Anything" အစီအစဉ်ကို BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူ လာရောက်ခဲ့တဲ့ Jisoo က သူ့အတွက် အရေးကြီးတဲ့နေ့တွေ မတိုင်ခင်ညဘက်မှာ အသင့်စားခေါက်ဆွဲစားလေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ထုတ်ဖော်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် ပထမဆုံးပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲ ပြုလုပ်မယ့် မင်းသား ဂျီဆူ
မင်းသား ဂျီဆူဟာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲအတွက် ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
Copyright © 2018-2022 The K-Pop Times Media, Myanmar. All Rights Reserved. Proudly presented by OrientWebs!